Nitrogen cycle: ihe ọ bụ, njirimara, usoro na mkpa | Network Meteorology
Okirikiri nke nitrogen
El okirikiri nke nitrogen ọ bụ usoro biogeochemical dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ndụ. E nwere ụdị dị iche iche nke usoro biogeochemical nke bụ ndị na-ekwe nkwa ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma maka mmepe nke ndụ. Ihe nile dị ndu na-adabere na nitrogen maka uto na mmepe ha.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile, mbido na mkpa nke usoro nitrogen.
1 Gịnị bụ nitrogen okirikiri
2 Mmiri nitrogen na-edozi n'ọtụtụ ụwa
3 Usoro nke nitrogen okirikiri
Gịnị bụ nitrogen okirikiri
Mmiri nitrogen abụghị naanị na setịpụrụ usoro kemịkal na usoro ndu nke na-enye ohere iji nye nitrogen ihe dị ndụ maka mmepe ha. Ma ọ bụ na ihe a dị mkpa ka mmadụ dị ndụ wee nwee ike itolite na ya niile. Enwere ọdọ mmiri dị iche iche, usoro nke usoro a nke dị nnukwu mkpa maka ndụ mmadụ. Dị ka ikuku carbon na usoro mkpụrụ ndụ ndị ọzọ, enwere ụzọ esi ewepụta ihe a. N'aka nke ọzọ, ka okirikiri ahụ wee mechie kpamkpam, a ghaghị inwe ebe e si enweta mmiri nke nitrogen. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-emezu na ngụkọta nitrogen zuru ụwa ọnụ ga-akwụsi ike ka ihe niile wee rụọ ọrụ ọfụma.
Agbanyeghị, ụmụ mmadụ na-ebute mmetụta dị iche iche gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ ụwa na nsogbu a na-enwe oke nsogbu. Otu n'ime njirimara anyị nwere nke usoro ndụ biogeochemical anyị nwere mmalite ya. Ma ọ bụ na nitrogen sitere na okike nke atomic nuklia ọhụrụ, ihe ndị na-abụghị nke kemịkal na steeti gas. Anyị maara na ụdị kemịkal dị iche iche na kemịkal na-egosipụta onwe ha n'oge niile. Ofrụ ọrụ nke ihe niile na-amalite site na ọnwụ nke elektrọn. Nke ahụ bụ mgbe, na-enweghị electrons, amino acid, DNA na protein nwere ike ime. N'ihi ihe a niile, nitrogen nitrogen bụ ọrụ maka ịrụ ọrụ dị mkpa na uto nke ahịhịa na anụ ahụ nke ihe ndị dị ndụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ụdị ọrụ ebumpụta ụwa na-enweghị atụ, ọ dị mkpa maka mmepe ndụ. Yabụ, mmadụ ga-amụrịrị ichebe usoro a ka ọ dị mkpa.
Mmiri nitrogen na-edozi n'ọtụtụ ụwa
Anyị ga-enyocha nke bụ isi mmiri ebe a na-achọta nitrogen n'ụwa niile. Akụkụ nke mbụ bụ ikuku. Anyị maara na ikuku anyị nwere ọnụnọ dị elu nkel nitrogen, nke a bụ 78% nke gas niile. Ọ bụ ọtụtụ n'ime oyi akwa nke ikuku a. Ọ bụ ezie na ikuku nitrogen anaghị arụ ọrụ ma ọ naghị eme ụdị mmeghachi omume ọ bụla, ọ na-ekere òkè ya na ihe a niile.
Ebe ọzọ enwere ọdọ mmiri nitrogen bụ na okwute sedimentary. A na - ahụ 21% nitrogen agwakọta ya na ihe ndị ọzọ ma kesaa ya n'oké osimiri. Ka anyi ghara ichefu na ndu mmiri chọkwara nitrogen iji nwee ike itolite nke ọma. A na-etinye nitrogen na ndụ mmiri n'ụzọ dị iche. Enwere ọtụtụ ihe ndị dị ndụ chọrọ nitrogen kwa ụbọchị ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ndị dị mkpa.
Akụkụ ikpeazụ nke ọdọ mmiri nke ihe a dị na microorganisms. Mkpụrụ ndụ ndị na-esonye na nitrogen bụ ndị a maara aha ndi edozi, nitrifiers na denitrifiers. Ndị na-ahụ maka ihe ndị ọzọ bụ ihe ndị dị ndụ na-achọ idozi nitrogen n’ahụ gị ma ọ bụ n’ihe ndị ọzọ. N'aka nke ozo anyi nwere nitrifiers. Ọ bụ maka ihe ndị ahụ dị ndụ ka nitrogen na-enye dị ka akụkụ nke ihe okike. Denitrifiers bụ ndị na-ewepu nitrogen n'ihi mmeghachi omume kemịkal.
Usoro nke nitrogen okirikiri
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi usoro nke usoro a si aga ebe ọ na-aga n'ihu. Anyị chọtara ụzọ dị iche iche nke nitrogen dị dị ka gas na-enwe otu mkpa ma ọ bụ ọzọ. Ka anyị hụ ihe ndị bụ isi n'ụzọ:
Mmezi: Ọ bụ oge nke ihe nile dị ndụ nwere ike inweta nitrogen ikuku nke nwere ike iji ya site na ụzọ abiotic. Ọ bụ naanị akụkụ nke gburugburu ebe obibi ka ha na-amaghị. Dịka ọmụmaatụ, ike eletrik sitere na àmụmà na radieshon nke anyanwụ bụ ihe ndị dị abiotic. Ndụ ndụ bụ akụkụ nke nwere ike inweta nitrogen site na microorganisms dị na ala.
Assimilation: nitrates kwụpụta ebe a. Osisi na-arụ ọrụ dị mkpa n'oge a niile. Ke cytoplasm nke osisi sel anyị nwere nitrates nke na-ebelata ka nitrites. Na nitrite a na-eji ya enwe ike itinye ya na osisi site na mgbọrọgwụ. Anyị maara na osisi jiri nitrogen mere nri iji too ma mụta nwa.
Mgbasa ozi: ọ bụ usoro nke nitrogen okirikiri ebe a gbanwere ya n'ime ammonium ion n'ihi omume nke microorganisms aerobic. Nke a pụtara na ha bụ microorganisms nke na-arụ ọrụ na ọnụnọ nke ikuku oxygen.
Ntinye ume: Ọ bụ akụkụ nke usoro nke mejupụtara ndu ndu nke amonia site na microorganisms aerobic. N'ihi nitrific a, ammonia nitrogen laghachiri n'ala nke osisi ga-eji ọzọ.
Mbughari: ọ bụ ndị na-abụghị usoro ka nitrific.
Nkwenye: bụ usoro na-abụghị nke mmezi. N'ebe a, anyị nwere usoro a maara dị ka iku ume anaerobic. Nke ahụ bụ, ụdị usoro a na - eme na enweghị ikuku oxygen. Usoro a maka ịlaghachi nitrogen na ikuku na nitrate agbaze na mmiri. Ọ bụ usoro nke ikpeazụ nke usoro okirikiri ebe ihe niile laghachiri na mbido ya.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, usoro a dị ezigbo mkpa na ọkwa obibi. Nitrogen dị mkpa ka ihe dị ndụ ma ọ bụrụhaala na ọ ga-eji ya. Ọ bụ ihe dị mkpa maka mmepụta nke DNA, amino acid, protein na nucleic acid. Ha ghọkwara ihe dị mkpa maka mmepe na imepụta ihe na ọrụ ugbo. Otutu fatịlaịza ejiri rụọ ọrụ ugbo iji mee ka ihe ọkụkụ too ngwa ngwa yana njirimara ndị ka mma nwere ọtụtụ oxygen.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere okirikiri nitrogen na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Okirikiri nke nitrogen
Oke Osimiri Alboran